Adobe mamoaka Photoshop Camera amin'ny Android sy iOS | Famoronana an-tserasera
Niandry ny kinova farany an'ny Adobe Photoshop Camera satria nanana fotoana hitsapana ny beta izahay. Rindrambaiko ho an'ny retouching izay mampiasa Adobe Sensei, haitao haisolon'ny Artificielle an'ny Adobe ary mahavita vokatra tsara ho an'ny karazana sary rehetra.
Amin'ity andro ity Adobe dia namoaka ny fampiharana amin'ny Android sy iOS, noho izany ny mpampiasa dia hanana eo am-pelatanany fampiharana maimaimpoana tsara hanasongadinana ireo sary nalainy tamin'ny findainy. Navoaka tamin'ny vokatra vaovao ny kinova 1.0 mba hanatsarana ara-kalitao ny sary nalainay tamin'ny finday.
Adobe Photoshop Camera dia mampiasa ny loharano eo an-toerana an'ny findainay, noho izany mila smartphone tsara ianao hahafahanao "manipy", satria raha tsy izany dia mety tsy hahomby ny fampisehoana. Raha ny tena izy amin'ny kinova voalohanyNa dia amin'ny avo lenta toy ny Samsung's Note10 + aza dia tsy nandeha araka ny tokony ho izy.
Eny, ao amin'ny kinova 1.0 sahady manana an'io ambaratonga fanatsarana io izahay hankafy ny vokany maro samihafa. Raha ny fanazavana, misy vaovao vitsivitsy ho avy mba hahafahantsika "manohina" ireo sary izay hankafy be rehefa ampitaina amin'ireo tambajotra sosialy sy fampiharana fandefasan-kafatra isika.
Ny tanjon'i Adobe dia ny mametraka eo am-pelatanan'ny karazana mpamorona, na dia marina aza izany ho an'ny ireo izay mampakatra atiny avo lenta ho fitaovana tena ilaina izy io, fampiharana iray hanatsarana kalitao ny sarinao. Ary ny marina dia afaka milaza isika fa izy io no fampiharana tsara indrindra amin'ny sivana. Ankehitriny dia mijanona ho an'ny mpamorona maro kokoa ny hanatevin-daharana amin'ny famoronana sivana miaraka amin'ny Adobe Sensei Artigence Intelligence ary afaka manome ny mpampiasa sivana betsaka kokoa hanatsara ny sarin'izy ireo amin'ny tambajotra.
Fahatongavana iray manontolo an'ny Adobe Photoshop Camera ary efa anananao amin'ny Android sy iOS ao amin'ny fivarotany avy no manao teny mifamatotra vitsivitsy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » Fitaovana famolavolana » Adobe dia namoaka Photoshop Camera ho an'ny Android sy iOS
Ahoana ny fomba fanadiovana sary an-tànana amin'ny Photoshop